भाउजू : लघुकथा - Lekhapadhi.com साहित्य/कला : Lekhapadhi.com lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी ८ मंसिर २०७७, सोमबार ०३:३८ मा प्रकाशित
मिल्ने साथीलाई भाउजू बनाउन पाएर भुईमा खुट्टा छैन नन्दकाे ।
भाउजू पनि मन परेकाे केटाेसँग बिवाह भएकाे र बच्चै देखिकाे मन मिल्ने साथीकाे भाउजू हुन पाएर मख्ख छिन ।
“भाउजू ! ए ! भाउजू ,आज फिलिम हेर्न जाउन । नयाँ फिलिम लागेकाे छ रे आजैबाट ।”
“दादालाई साेध्नु पर्छ, के भन्नु हुन्छ ? आज आउन अलि ढिलाे हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । साेध्नु न त फाेन गरेर ।”
“नाई,म त साेध्दिन । हजुर नै साेध्नु न भाउजू , प्लिज ।”
“बुबा- आमालाई साेध्नु भयाे त ?”
“छैन साेधेकाे, अब साेध्छु ।”
केहिबेर ओत लागेर हिडदा पनि दुवै भिजेर निथ्रुक्क भएर घर पुग्दा झमक्क साँझ पर्याे ।
बुबा – आमा र दादा सबै सगँ अनुमति लिएर नन्द- भाउजू १२-३ काे शाे फिल्म हेर्न गए । फिल्म हेरेर बजारमा सानाे तिनाे किनमेल गरेर खाजा खाए । फर्कने बेलामा मुसलधारे पानी परेकाले एकछिन त ओत लागेर बसे । केहिबेर ओत लागेर हिडदा पनि दुवै भिजेर निथ्रुक्क भएर घर पुग्दा झमक्क साँझ पर्याे ।
“बिचरी ! हाम्री सानी त के जान्दछे र ? भाउजू चाँहीले त अलि बुझ्नुपर्ने नि । साँझ नपारी घर फर्कनुपर्छ भनेर ।”
आज कति ढिलाे गरे केटीहरुले, पानी परेर हाेला बुवा भन्द‌ै हुनुहुँदा‌े रहेछ । उनिहरु हतार-हतार कपडा फेर्न आ-आफ्नाे काेठामा पसे । बाहिर आमाले बुबा सँग भनेकाे सुनियाे । “बिचरी ! हाम्री सानी त के जान्दछे र ? भाउजू चाँहीले त अलि बुझ्नुपर्ने नि । साँझ नपारी घर फर्कनुपर्छ भनेर ।”